SOMALI Informasjon til asylsøkere i Norge Warbixin ku socota magangelyo doonayaasha Norway - PDF
Download "SOMALI Informasjon til asylsøkere i Norge Warbixin ku socota magangelyo doonayaasha Norway"
Torild Anette Dahle
1 SOMALI Informasjon til asylsøkere i Norge Warbixin ku socota magangelyo doonayaasha Norway Buugaan waxaa diyaariyay Ururka Magangelyo doonayaasha Norway (NOAS). NOAS waa urur aan dowli ahayn oo u dooda xaquuqda bini aadamka oo siiya warbixin iyo caawinaad xaga sharciga ah dadka magangelyo doonka ah. Buugaan waxaa ku yaalla warbixin muhiim u ah magangelyo doonayaasha magangelyada ka codsada Norway. Waxaad ka aqrisan kartaa waxyaabahaan: 1 Yaa xaq u leh in la badbaadiyo? 2 Yaa la siin karaa oggolaasho joogitaan oo ku salaysan arrimo bini aadanimo? 3 Waddankee ka baaraandegi doona codsigaada magangelyo doonka? 4 Yaa ka baaraandegi doona codsigaada magangelyo doonka ee Norway? 5 Maxa dhaca markaad magangelyo codsato? 6 Talooyin muhiim ah oo ku saabsan wareysiga magangelyo doonka 7 Waajibaadka ku saaran iyo xaquuqda aad leedahay markaad tahay magangelyo doone 8 Waajibka xog qarinta 1. HVEM HAR RETT TIL BESKYTTELSE? 1. YAA XAQ U LEH IN LA BADBAADIYO? Waxaad xaq u leedahay badbaadin, oo laga wado magangelyo, haddii aad khatar ugu jirto in lagu dilo, lagu jirdilo ama laguu geysto xadgudubyo kale oo khatar ah haddii aad ku laabatao dalkaagii hooyo. Haddii xukuumadda wadankaada hooyo ay ku badbaadin karto ama aad ka helayso meelo nabad ah wadankaada, caadi ahaan xaq uma lihid badbaadinta Norway. Dadka xaquuqda u leh in la badbaadiyo, waxay soo hoos gelayaan heshiisyo caalami ah oo ay Norway waajib ku tahay inay raacdo. 2. HVEM KAN FÅ OPPHOLD PÅ HUMANITÆRT GRUNNLAG? 2. YAA LA SIIN KARAA OGGOLAASHO JOOGITAAN OO KU SALAYSAN ARRIMO BINI AADANIMO? Haddii aadan badbaadin xaq u lahayn, xukuumaddu waxay eegi doontaa
2 inaad buuxinayso sharuudaha lagugu siin karo oggolaansho degenaansho arrimo bini aadmino oo adag dartood ama xariir qaas ah oo adag oo aad Norway la leedahay. Middaan waxaa loo yaqaannaa oggolaansho joogitaan oo ku salaysan arrimo bini aadminimo. Caadi ahaan waa inaad baasabboor haysato si lagu siiyo oggolaashada joogitaan ee noocaan oo kale ah. Haddii aadan u keenin baasabboor xukuumadda, waxaa dhici kara in codsigaada la diido ama in lagu siiyo oggolaansho xaddidan oo aan ku gaarsiinayn inaad qaadato oggolaansho joogitaan oo waarta ama in qoyskaada halkaan laguugu keeno. 3. HVILKET LAND SKAL BEHANDLE ASYLSØKNADEN DIN? 3. WADDANKEE KA BAARAANDEGI DOONA CODSIGAAGA MAGANGELYO DOONKA? Dadka Norway ka codsada magangelyada dhammaantood loogama baaraandego codsigooda Norway. Heshiiska Dublin waa wada shaqeeyn ka dhaxeeysa wadamada Yurub middaasoo hubinaysa in codsiga magangelyo doonaha looga baaraandego mid ka mid ah wadamada uu heshiisku quseeyo. Codsigaada waxaa looga baaraandegi doonaa waddan kale oo ka mid ah waddamada uu ka dhaxeeyo heshiiska Dublin haddii haddii wadankaas: laga diiwaan geliyey farahaada aad ka codsatay magangelyo aad ka haysato fiise ama oggolaansho joogitaan aad ku leedahay xubno qoyskaada ah oo kuu dhow Caadi ahaan waxay ku qaadataa labo ilaa saddex bilood xukuumadda Norway inay soo baarto iyo go aan ka gaarto haddii feylkaada lagu wareejinayo wadan kale iyo in kale. Haddii aad u baahan tahay warbixin dheeraad ah, waxaad NOAS ka heli kartaa buug yar oo ku saabsan wadashaqaynta Dublin. 4. HVEM BEHANDLER ASYLSØKNADEN DIN I NORGE? 4. YAA KA BAARAANDEGAYA CODSIGAADA MAGANGELYO DOONKA EE NORWAY? Waaxda Agaasinka Ajnebigu (UDI) waa qeyb ka mid ah Dowladda Norway. Iyaga ayaa ku wareysan doona oo go aan ka gaari doona in oggolaasho lagu siinayo iyo in kale. UDI si taxaddar leh ayay u eegtaa
3 dhammaan codsiyada magangelyo doonka, codsi walbana goonidiisa ayaa loo eegaa. 5. HVA SKJER NÅR DU SØKER OM BESKYTTELSE? 5. MAXA DHACA MARKAAD MAGANGELYO CODSATO? Waxaad iska diiwaangelinaysaa booliiska, adigoo ah magangelyo doon Booliisku waxay kaa qaadi doonaan masawir iyo farahaada. Waxay wax ka weydiin doonaan aqoonsigaada, sidii aad Norway ku timid iyo sababta aad magangelyada u codsanayso. Haddii aad wadato waraaqo aqoonsi waa inaad kuwan dhiibtaa marka lagu diiwaangelinayo. Waxaa lagu dejin doonaa xero qaxooti Diiwaangelinta kaddib waxaa lagu geyn doona xero qaxooti. Waxaad halkaas joogi doontaa dhowr maalmood ka dibna waxaa laguu wareejin doonaa xero ku meel gaar ah ama mid caadi ah. Dadka halkaas ka shaqeeya ayaa warbixin dheeraad ah kaa siin doona waajibaadka ku saaran iyo xaquuqdaada aad leedahay. Waxaa laga baari doonaa cudurka qaaxada (tiibisho) Maalmaha ugu horreeysa ee aad timaaddo xerada qaxootiga ayaa waxaa lagaa baari doonaa cudurka qaaxada. Middaas waxay qasab ku tahay qof walba. Haddii aad qabto dhibaato caafimaad oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto, waa inaad arrintaas u sheegtaa xafiiska caafimaadka. Waxaad warbixin iyo tusaaleynba ka heli doontaa NOAS Maalmaha kugu horreeya ee aad xerada qaxootiga timaaddo waxaad warbixin ka heli doontaa NOAS. NOAS waa urur aan dowladda ka mid ahayn oo ilaaliya xaquuqda bini aadanka, kana shaqeeya xuquuqda magangelyo doonka ee Norway. Shaqada NOAS ee xerada qaxootigu waa inay siiyaan warbixin iyo talo dadka magangelyo doonka ah. Waxaa lagu tusi doonaa filim ku saabsan warbixinta habka ay u socoto howsha magangelyo doonista, waxaana kula hadli doona xubin ka tirsan shaqaalaha NOAS. Ujeeddada wadahadalku waa in laguu diyaariyo wareysiga UDI-da. Waa mid muhiim ah inaad wada hadalkaas ku dhiibato wixii su'aalo ah ee aad ka qabto codsiga magangelyo doonka. Wada hadalkaasna waxaa lagu qaban doonaa luqad aad si fiican u fahmayso. Haddii ay u badan tahay in laguu celinayo waddan kale oo ka mid ah waddamada Yurub ee uu ka dhaxeeyo Heshiiska Dublin, waxaa muhiim ah inaad middaas u sheegto shaqaalaha NOAS si ay kuu siiyaan warbixinta saxda ah.
4 Shaqaalaha NOAS waxaa saaran waajibka xog qarinta. Waxaa ku wareysan doona UDI Wareysiga magangelyo doonku waa fursadda ugu fiican ee aad ku sheegi karto sababta aad u soo codsatay magangelyada. Wareysiga magangelyadu caadi ahaan waxa uu qaataa dhowr saacadood. Si cad oo muuqata u sharrax wixii kugu dhacay iyo waxa aad ka cabsanayso inay kugu dhacaan haddii aad ku noqoto waddankaadii hooyo. Turjibaan ayaa kula joogi doona inta uu wareysigu socdo. Turjibaanka waxaa saaran waajib xog qarin, waana dhexdhexaad. Haddii aad wax dhibaato ah ku qabto fahmidda waxa la sheegayo, waa inaad markiiba u sheegtaa qofka ku wareysanaya. Dhammaadka wareysiga magangelyo doonka waxaad saxiixi doontaa warbixintii wixii aad sheegtay muddadii uu wareysigu socday. Turjibaanka ayaa kuu akhrin doona. Haddii aad doonayso inaad wax ka beddesho waxa ku qoran warbixinta, waa inaad sheegta inta aadan saxiixin ka hor. Waxaa laguu wareejin doonaa xero caadi ah halkaas oo aad deggenaan doonto inta aad jawaabta ka helayso UDI Xeradu waa deeq bilaash ah. Haddii aad doonayso waxaad degi kartaa guri si gaar ah loo leeyahay inta aad jawaabta ka sugayso UDI, laakiin wax caawinaad dhaqaale ah laguma siin doono. Haddii aad halkaas ka guurto, waa inaad u sheegto xerada qaxootiga, xeraduna waxay qoran doontaa ciiwaankaada cusub. Waa mid muhiim ah in ciiwaankaada la qoro, si aad u hesho jawaabta UDI-da. Warbixin Cusub Haddii aad hesho warbixin cusub oo muhiim u ah codsigaada magangelyada ka dib markii lagu wareystay, waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu soo sheegtaa UDI-da. Sheeg sababta aad warbixintaas markii hore ugu sheegi weyday. Shaqaalaha xerada qaxootiga ayaa kuu sheegi doona sidaad arrintaan ku sameyn lahayd. Jawaab ayaad ka sugaysaa UDI Jawaabta UDI-du waxay qaadan kartaa muddo gaaraysa dhowr toddobaad ilaa iyo wax ka badan hal sanno si looga baaraandego codsigaaga magangelyo doonka. Haddii ay jawaabtu kugu qaadato muddo dheer, waxaa laga yaaba inay sababtu tahay in UDI ay baaritaan ku sameeynayaan warbixintaadu inay run tahay iyo in kale. Waxay sidoo kale noqon kartaa in UDI ay baarayaan xaaladda waddankaadii hooyo, ama waxaa kale oo laga yaabaa in sababtu tahay inay badan yihiin dadka jawaabta ka sugaya UDI. Jawaab ayaad UDI ka helaysaa: Oggolaasho joogitaan ama diidmo
5 Oggolaasho joogitaan Haddii lagu siiyo oggolaasho joogitaan, waxaa laguu fidin doonaa deeq lagugu dejinayo degmo. Waxaa warbixin dheeraad ah laga siin doona xerada. Diidmo Haddii codsigaada la diido, waxaad xaq u leedahay inaad cabasho ka qaadato. Waxaa lagu siinayaa qareen bilaash ah, caadi ahaan shan saacadood, kaas oo cabashada kaa caawin kara. Waa inaad cabashada ku qaadato saddex toddobaad gudahood. Caadi ahaan waa laguu oggolaan doonaa inaad Norway sii joogto inta cabashadaada laga baaraandegayo, laakiin laguu oggolaan maayo haddii ay UDI aaminsan tahay in aanu codsigaadu wax sal iyo baar ah lahayn. Guddiga arrimaha ajnebiga (UNE) UNE ayaa eegi doona cabashadaada. UNE waxay kuugu yeeri karaan inaad u timaaddo oo la kulanto ama aad soo dirto warbixinno dheeraad ah. Haddii lagu diido, waxaa waajib kugu ah inaad dib ugu noqoto waddankaadii hooyo Waa inaad ku laabataa wakhtiga uu booliisku kuu qabto, kaas oo caadi ahaan labo toddobaad ah. Markii uu wakhtigaas dhammaado ma lihid sharci aad ku sii joogto Norway iyo xaq aad ku sii degenaato xerada qaxootiga midna. Haddii lagu siiyo diidmo kama danbeys ah, oo ay UNE qaadato go aan la mid ah kii go aankii UDI-du ay kuugu diidday magangelyada, waxaad dooran kartaa inaad waddanka iskaa uga tagto adigoo ay ku qaadayaan International Organization for Migration (IOM), haddii kale waxaa dalka kaa saaraya booliiska (celin khasab ah). Dib u noqoshada xorta ah ee IOM Xukuumada Norway waxay kuu diyaarin doontaa inaad si xornimo ah aad waddankaadii hooyo dib ugu noqoto. Dib u noqoshada xorta ah waxaa loola jeeda inaad ka qabyqaadato hawsha safarkaada dib u noqoshada waddankaada hooyo adigoo codsanaya barnaamijka dib u noqoshada xorta ah ee Norway ee lagu magacaabo Voluntary Assisted Return Prograamme (VARP). Barnaamijka VARP waa wada shaqeeyn ka dhaxeeysa UDI iyo IOM oo ah kuwa diyaariya safarka dib u noqoshada. Markii aad si xornimo ah dib ugu noqonayso waddankaadii, dowladda Norway ayaa bixinaysa qarashka safarka. Dhammaan dadka aan haysan oggolaasho joogitaan oo ay Norway ku
6 joogaan, waxay codsan karaan dib u celinta xorta loo yahay. Haddii codsigaada magangelyada la soo diido, waxad haysataa waqti xaddidan oo loo baahan yahay inaad Norway uga baxdo. Haddii aad doonayso inaad si xorimadaada ah u noqoto, waa in aad codsi u dirtaa IOM wax yar ka dib marka codsigaada magangelyada la soo diido. Haddii haddaba codsigaadaas la aqbalo, IOM ayaa waxay kaa caawin doontaa sidii aad ku heli lahayd dokumeenti aad ku safarto, waxayna kuu dalbi doontaa tikit. Si ay haddaba IOM kuu qaaddo waa inaad haysato baasabboor ama dukumiinto lagu safri karo oo shaqaynaya kuwaas oo ay bixiyeen mas uuliyiintii dalkaaga. Haddii aadan haysan baasabboor ama dokumeenti safar oo shaqaynaya, IOM ayaa kaa caawin doona inay mid kaaga codsadaan safaaradda ama qunsuliyadda waddankaaga ee ugu dhow. IOM waxay sidoo kale ku caawin karaan muddada safarka iyo markaad waddankaaga gaarto, haddii aad taas u baahan tahay. Waxaad warbixin intan ka badan oo ku saabsan dib u noqoshada xorta ah iyo in lagaa caawiyo buuxinta foomka codsiga labadaba ka heli kartaa xerada qaxootiga ee aad ku jirto, xafiiska gobolka ee UDI ama IOM. Dib u celinta khasabka ah Haddii ka dib markii diidmo kama danbeys ah lagu siiyay aad waddankaadii hooyo u noqon waydo adigoo iskaaga ah, waxaa waddanka kaa saari doona booliiska ka dib markay dhammaato muddadii laguu qabtay. Waa inaad adigu bixisaa qarashka dalka lagaaga saarayo. Haddii aadan awoodin inaad bixiso tikitka diyaaradda, dowladda ayaa markaas bixin doonta kharashka, laakin waxaa waajib kugu ah inaad dib ka bixiso qarashkaas. Haddii aadan bixin qarashka qaadista, waxaa mustaqbalka laguu diidi karaa in lagu siiyo fiise iyo inaad soo geshid Norway iyo waddamada kale ee Yurub. Haddii aad ku kacdo fal danbiyeedyo Haddii aad sameeyso fal danbiyeedyo, waxaa codsigaada magangelyo doonka looga baaraandegi doonaa si aad u dhaqso badan, si ay u suura gasho in Norway degdeg lagaaga saaro. Haddii aad sameeyso wax sharci daro ah waxaa sidoo kale laga saari karaa Norway, taasoo keeni doonta in aadan mustaqbalka soo geli karin Norway iyo waddamada kale ee Yurub intooda badan. 6. VIKTIGE RÅD FOR ASYLINTERVJUET
7 6. TALOOYIN MUHIIM AH OO KU SAABSAN WAREYSIGA MAGANGELYO DOONKA Si qoto dheer oo tafaasiil leh u sheeg sababta aad uga soo tagtay waddankaadii hooyo iyo waxa aad ka baqayso inay kugu dhacaan haddii aad dib ugu noqoto. Xoogga saar wixii kugu dhacay iyo waxa kugu dhici doona haddii aad dib u noqoto. Wax walba si cad oo la taaban karo u sheeg ilaa inta suurtagalka ah. Haddii ay kula socdaan carruur ka yar 18 sanno jir, ka sheekee xaaladooda iyo wixii ay la soo kulmeen. Weydii wareystaha inuu kuu faahfaahiyo haddii ay jiraan wax aadan fahmin. Haddii aad haysato dokumeenti micno u samaynaya codsigaada magangelyo doonka, waa inaad horay ugu soo qaadataa wareysiga. Runta sheeg. Haddii aad sheegto wax aan run ahayn, middaasi waxay keeni kartaa in la diido codsigaada magangelyo doonka. Waxaa sidoo kale lagaa tarxiili karaa Norway, middaas oo keeni doonta in aadan soo geli karin Norway iyo waddamada kale ee Yurub intooda badan. Dumarka magangelyo doonka ah Dumarku waxay la kulmi karaan noocyo dabagal ah oo ka duwan kuwa ay raggu la kulmaan. Kuwaasi waxay noqon karaan kuwo ay adag tahay in laga hadlo, qaasatan in rag loo sheego. Haddii aad doonayso waxaad la hadli kartaa haweenay ka mid ah shaqaalaha NOAS. NOAS ugu sheeg sida ugu dhaqsaha badan ka dib markii aad fiirsato filimka warbixinta ah. Waxaad sidoo kale codsan kartaa inay qof dumar ah ku wareysato iyo turjubaan dumar ah marka ay UDI ku wareysanayso. Waxaad arrintaan ku sheegan kartaa wadahadalka NOAS. Ma kula socdaan wax carruur ah oo ka yar 18 sanno jir? Xaaladda caruurtu waa muhiim marka la qiimaynayo codsiga magangelyo doonka. UDI waxay doonaysaa inay ogaato haddii uu ilmuhu leeyahay sabab gaar ah oo isaga lagu siiyo magangelyo, iyo sida uu ilmuhu u arko xaaladdiisa nololeed. Waa mid muhiim ah inaad u sheegto UDI arintaas marka lagu wareysanayo. UDI-du way wareystaa carruurta ay da doodu ka weyn tahay 7 sanno jirka. Waa mid muhiim ah inuu ilmuhu afkiisa ka sheego wixii uu soo maray. Mararka qaarkood waxay carruurtu dhibaatooyinka u dareemaan si ka daran sida ay dadka waaweyni u dareemaan. UDI-du marna ma wareysanayso ilmaha haddii aanu ilmuhu rabin in la wareysto.
8 7. PLIKTER OG RETTIGHETER DU HAR SOM ASYLSØKER 7. WAAJIBAADKA KU SAARAN IYO XAQUUQDA AAD LEEDAHAY MARKAAD TAHAY MAGANGELYO DOONE Waxaa waajib kugu ah inaad ka qaybqaadato sidii lagu caddeyn lahaa aqoonsigaada Waa mid muhiim ah xukuumadda Norway inay ogaato qofka aad tahay. Sidaas la adligeed waa muhiim inaad keento dokumeenti muujinaya aqoonsigaada. Haddii ay mas uuliyiinta waddankaada dabagal kugu hayaan, mas uuliyiinta Norway kaa dalbi maayaan inaad mas uuliyiintii dalkaaga la xiriirto si aad u hesho dokumeenti aqoonsi. Haddii ay mas uuliyiinta Norway aqoonsigaaga ka shakiyaan, waxaad khatar ugu jirtaa: In lagu rumayn waayo Waxay hoos u dhigaysaa fursaddaadii aad ku heli lahayd oggolaasho joogitaan inaad weydo xaquuq aad heli kari lahayd in lagu siiyo oggolaasho joogitaan oo xaddidan Waxaa waajib kugu ah inaad bixiso warbixin sax ah Markaad tahay magangelyo doon waa inaad sharraxdo sababta aad u codsanayso magangelyada. Sidaas la adligeed waa inaad sida ugu fiican ee suurtagal ah la shaqayn ula timaaddaa oo aad u keento dokumeentiga lagama maarmaanka ah. Wax kasta oo aad dadka kale ka maqashay intaadan magangelyada codsan ka horba, waxaa muhiim ah inaad mas uuliyiinta Norway u sheegto sababta saxda ah ee codsigaada magangelyada. Waa ficil danbiyeed haddii aad bixiso warbixin aan sax ahayn. Waxay keeni kartaa in waddanka laga saaro. Waxaa laga yaaba inaad xaq u leedahay inaad shaqeysato inta aad magangelyo doonka tahay Waxaad heli kartaa oggolaasho shaqo inta aad sugayso in codsigaada magangelyo doonka laga baaraandego haddii aad caddayn karto aqoonsigaada, oo aadan ku jirin howsha Heshiiska Dublin. Oggolaashada shaqadu waxay shaqaynaysaa ilaa lix bilood, laakiin waa la cusboonaysiin karaa.
9 Waxaad xaq u leedahay inaad hesho daaweyn caafimaad Waxaad xaq u leedahay inaad hesho daaweynta caafimaadka ee lagama maarmaanka ah inta aad sugayso jawaabta codsigaada magangelyo doonka. Daaweynta carruurta ay da doodu ka yar tahay 12 sanno jirku waa lacag la aan. Qof kasta oo ku nool Norway waxa uu caadi ahaan baxshaa qayb ah qarashka daaweynta caafimaadka. Haddii aad caawinaad uga baahan tahay dhaqtarka cilminafsiga (psykolog), waxaad ka codsan kartaa UDI in ay kaa bixiyaan qarashkiisa. Kala xariir wixii warbixin dheeraad ah shaqaalaha xerada qaxootiga. Haddii ay ku hayso dhibaato caafimaad oo qatar ah, waa inaad u sheegtaa UDI. Waxaa kuu furan inaad ka noqoto codsigaada magangelyo doonka Waxaad waqtigii aad doonto dib ula noqon kartaa codsigaada magangelyo doonka. Markaas waxaa kuu bannaan inaad ka codsato IOM inay kaa caawiyaan dib u laabashada waddankaadii hooyo. 8. TAUSHETSPLIKT 8. WAAJIBKA XOG QARINTA Booliiska, UDI, UNE, turjubaanka, qareenka, shaqaalaha caafimaadka iyo NOAS waxaa saaran waajib xog qarin. Taasi macnaheedu waxaa weeyaan inaysan siin karin warbixinta codsigaada magangelyo doonka mas uuliyiinta waddankii aad ka timid. Sidoo kale uma ay sheegi karaan wixii aad sheegtay dadka kale ee aan shaqada ku lahayn codsigaada magangelyada. Jabinta waajibka xog qarintu waa ficil danbiyeed. Sidaas la adligeed uma baahnid inaad ka cabsato inaad si buuxda uga sheekeyso sababta aad ugu baahan tahay in magangelyo lagu siiyo. CIIWAANNO Booliiska ajnebiga (Politiets utlendingsenhet) Booliisku waxay diiwaan geliyaan dadka magangelyo doonka ah ee cusub. Booliisku waxay kaloo waddanka ka saaraan dadka magangelyo doonka ah ee inta codsigooda la diiday aan dalka iskood uga bixin. Ciiwanka Boostada: Postboks 8102 Dep., 0032 Oslo Ciiwaanka soo booqashada: Christian Krohgs gate 32, Oslo Telefoonka: , Fax:
10 Waaxda Agaasinka Ajnebiga (UDI) waa hey ad dowladeed oo ay shaqooyinkeeda ka mid yihiin ka baaraandegidda codsiyada magangelyo doonka, qoys isu keenidda, fiisayaasha iyo arrimaha qaadashada dhalashada dalka. UDI waxay kaloo mas uul ka yihiin xeryaha qaxootiga. Ciiwaanka Boostada: Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Ciiwaanka soo booqashada: Hausmannsgt. 21, Oslo Telefoonka: , Fax: Internet: Ururka Caalamiga ah ee Haajiriinta (IOM) Warbixinta caawimaadda dib u noqoshada uu qofku iskiis u dooranayo.
11 Ciiwaanka Boostada: Postboks 8927 Youngstorget 0028 Oslo Ciiwaanka soo booqashada: Storgata 10a, dabaqa 2aad, Oslo Saacadaha shaqada: Maalmaha shaqada: 10:00 15:00 Maalmaha fasaxa: Xiran yihiin Telefoonka: Fax: Guddiga arrimaha ajaaniibta (UNE) Waa unug maammul oo sidii maxkamad oo kale ah kaas oo ka baaraandega cabashooyinka laga qaato diidmada ay UDI bixiso. Ciiwaanka Boostada: Postboks 8165 Dep., 0034 Oslo Ciiwaanka soo booqashada: Stenersgt. 1B/C, Oslo Telefoonka: , Fax: Internet: Laanqayrta Cas ee Norway (Norges Røde Kors), adeegga baafinta, waxay dadka ka caawiyaan sidii ay isu heli lahaayeen xubnaha qoyska ee ku kala dhumay dagaallada, khilaafyada iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah. Laanqaynrta casi ma siinayaan warbixintaada UDI ama hey ado kale midna. Adeeggu waa bilaash. Ciiwaanka Boostada: Postboks 1 - Grønland, 0133 Oslo Ciiwaanka soo booqashada: Hausmannsgt. 7, Oslo Telefoonka.:
JAANTUUS. Qaabka wax loo sawiro. Cinwaan Vunne Tapt Uavgjort Tilmaamaha kan ugu weyn. Waa tiirka kor ugu haya jiheeyaha.
NORSK SOMALI EKSEMPEL DIAGRAM JAANTUUS Mal Qaabka wax loo sawiro Tabell Cinwaan Vunne Tapt Uavgjort 3 2 4 100 Søylediagram Tilmaamaha kan ugu weyn 80 60 40 20 0 Øst Vest Nord Stolpediagram Waa tiirka kor